काठमाडौँ । निकै गरिब मानिस पनि खुुसी हुन सक्छ र निकै सुखमय जीवनयापन गर्ने मानिस दुःखी पनि हुन सक्छ । तर मानिस कसरी खुसी हुने भन्ने कुरा उसको जीवनयापन, चाहना, सन्तुष्टि तथा व्यक्तित्वसँग सम्बन्धीत हुन्छ । धेरै मानिसहरुले विलासितालाई खुसीसँग दाँज्छन् ।
सबै मानिसहरु खुशी चाहन्छन् तर थोरै मानिसहरुमात्रै दुःखबाट मुक्ति पाएका हुन्छन् । मनयोग्य पैसा कमाएर मात्रै खुशी नभइने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् र हाम्रै जीवन व्यवहारमा हेर्दा पनि हुन्छ ।
विश्वमा फिनल्याण्ड सबैभन्दा बढी खुसी देश भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । फिनल्याण्ड विश्वकै खुसी देश हो तर धनी होइन । विश्वकै धनी त अमेरिका हो तर त्यहाँका मान्छेहरु भने पूर्णरुपमा खुसी छैनन् ।
खुसी हुन के गर्नुपर्ने पाँच काम
१. असफलतालाई आत्मसाथ गर्ने
दुखी भइन्छ भनेर जीवनमा महत्वाकांक्षा नराख्ने गर्नु हुँदैन । तर, कुनैपनि लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा असफलता हुन पुगेमा निराश हुनु हुँदैन । जीवनमा सधैँ सफल भइँदैन भन्ने सत्यलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । र असफलताको पाठ सिकेर त्यसलाई सामर्थ्यमा बदल्नु पर्छ ।
२. सहयोगी बन्ने
३. माफ गर्ने
जसले कसैले माफ गर्न जानेको हुन्छ त्यसले नै माफि पाउँछ । गल्ती जीवनमा हरेक मानिसहरुबाट हुन्छ । कहिलेकाहिँ आफूले भुलवश वा आवेशमा आएर भएका गल्तीले दोस्रो व्यक्तिको मन दुखेको हुन्छ । आफूले अरु कसैको केही बिगारेको भए उससँग माफी माग्ने र आफूले आफैंलाई पनि गल्ती नदोर्होयाउने गरी माफी दिने गर्नुपर्छ । माफि दिने मानिसमा गल्तीको आत्मग्लानी कम हुन्छ । यसले अझ जिम्मेवार पनि बनाउँछ । यसले मनलाई हल्का बनाउँछ ।
४. सन्तुष्ट हुने
मनलाई जति कडा बनाइयो, त्यति नै भाँचिने सम्भावना अधिक रहन्छ । त्यसैले हामीले मन स्वस्थ राख्न वा भाँचिन नदिन उदार हुन जरुरी हुन्छ । उदारता भएको व्यक्तिमा माथिका सबै गुण हुन्छन् ।
मानिसलाईृ दुःखी बनाउने प्रमुख पाँच कारणहरुः
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले हामीलाई चन्द्र छुने लक्ष्य लिनको लागि प्रेरणा दिएका छन् । जसको अर्थ हामीले जीवनमा ठूला इच्छा चाहना तथा लक्ष्य राख्नु पर्छ भन्ने हो । वास्तवमा त्यसले नै जीवनमा प्रगतितर्फ लैजान्छ । तर कतिपय अवस्थामा मानिसहरुमा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न नसक्दा निराश हुने तथा दुःख लाग्ने हुन्छ । यो सामान्य पनि हो तर यो लामो समयसम्म रहनु हुँदैन । असफलतालाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा जीवन दुखी हुन जान्छ ।
खुसीको ठूलो शत्रु हो, अहम् । अहमले मानिसको व्यक्तित्व विकासमा असर र्पुयाउँछ । यसले व्यक्तिको छविलाई पनि खल्बल्याउँछ । यसले मान्छेलाई डिप्रेशनमा धकेल्छ । अहम्ले व्यक्तिलाई म मात्रै सही र अरु सबै गलत भन्ने भावना ल्याउँछ । अन्ततः यसले आत्मग्लानी महशुस गराउँछ । जसले दुखी बनाउँछ ।
एउटा उखान छ, ‘विष नभएको सर्प र इख नभएको मानिसको काम हुँदैन’ भन्ने । हो मानिसमा केही गर्ने इख हुनुपर्छ तर त्यो ईर्श्यामा परिणत हुनुहुँदैन । यस्तो प्रकारको इखले पनि आफैँलाई समस्यामा पार्छ । कसैले निरुत्साहित बनाउने प्रयास र्गयो भने उसलाई देखाउनकै लाथि इख लिइयो भने चाहीँ त्यसले सकारात्मक रुप लिन सक्छ । तर यसले व्यक्तिको मन दुख्नु हुँदैन । उसले यस्तो गरेको थियो, त्यसलाई यस्तो गर्छु खालका भावना आएमा भने त्यसले रिस बढाउँछ । र हामीलाई खुसी हुनबाट रोक्छ ।